Haweenay Taageerta Kooxda Jwxo-shiil oo Isku Hor Qaawisay Hool uu Shir ka Socday Nairobi – Rasaasa News
May 2, 2011 Haweenay Taageerta Kooxda Jwxo-shiil oo Isku Hor Qaawisay Hool uu Shir ka Socday Nairobi
Dadka taageera kooxda Jwxo-shiil, oo dhamaantood ah dad aan ka deganayn xaga maskaxda, ayaa isugu jira laba nooc oo kala ah; dad reer miyi ah iyo dadka nolosha ka dhacay. Labadan nooc ee dadka ah ayay takhaatiirta saykoolajigu [phsycology] sheegaan in ay waxyaabo badan wadaagaan dadkani sida; damqashada, deganaan la,aanta, gacan qaadka iyo qiirada.
Waxaana markhaati ma doonta ah,in taageerayaasha kooxda Jwxo-shiil, ay fooxumooyin aan la koobi karin ka sameeyeen meelo kala duwan iyaga oo waxyeelo gaadhsiiyey dad badan.
Ficiladii ugu dambeeyey ee ay sameeyaan taageerayaasha kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxay shalay ka dhacday magaalada Nairobi. Arinta ayaa ahayd in Haweeney ay isku horqaawisay 400 ruux, arintan la yaabka leh oo ku cusub dhaqanka Somalida ayaa ka dhacday hool uu ka socday shir uu ku qabtay magaalada Nairobi ururka UWSLF.
Haweenaydan oo ka mid ah dadka taageera kooxda Jwxo-shiil, ayaa la sheegay in durba ay marada saareen dadkii ag fadhiyayi, iyada oo aad u jidbaysan oo caytamaysa. Kooxda Jwxo-shiil ee arbush doonka ahayd oo ay haweenaydu ka mid ahayd ayaa la sheegay in la qabtay, ka dibna loo dhiibay ciidamda nabadgaliyada Kenya oo goobta shirka diyaar ku ahaa, waxayna dadkan rabsho abuurka lagu xidhay saldhiga Booliska ee Pangani. Waxaana todobaadka bilaabanay la horgaynayaa maxkamad, waxaana la filayaa in lagu xukumi doono falka ay gaysteen.
Wali lama ogga waxa haweenaydan ku kalifay in ay isku hor qaawiso dhowr boqol oo ruux, waxayse u ekayd mid ay uga danlahayd in ay shirka ka dhex abuurto buuq, waxaa dhaqan noocan ah inta badan sameeya haweenka reer galbeedka.
Afhayeenka labaad ee baarlamaanka Kenya mudane Faarax Dawaara, ayaa isagu ilaa xalay waday dadaal uu ku sii daynayo kooxdan qas wadayaasha ah, isaga oo saacada badan ku sugnaa saldhiga Booliska Pangani,lamana hubo in uu ku guulaysn doono iyo in kale.
Si kastaba arintu ha ahaatee shirka oo ahaa mid dadka oo dhan u furan, ayaa ku soo gabagaboobay jawi aad u wanaagsan mucaarad iyo muxaafidba waxa ay rabeena ay waydiiyeen masuuliyiinta UWSLF.
Cadaaladd Daradii Laga Dhaxlay Cabdimajiid Goormay Dhamaan Doontaa?